सामन्तवादी पोशाक कि सोच ? — newsclubnepal.com
जनार्जन पाैडेल प्रकाशित : २०७५/९/२४ गते
कुनै पनि समाज आधुनिकतातिर जाँदा सभ्य र सुसंस्कृत हुनुपर्ने हो तर ठिक त्यसको उल्टो नेपाली समाज भने आधुनिकताको नाममा असभ्य बन्दै गएको छ ।आधुनिकताको अभ्यास गर्ने शिलशिलामा समाजमा अश्लील र नैतिकहीनहरुको जत्था उत्पादन भइरहेको छ । समाज परिवर्तनशील छ, संस्कृति पनि संगसंगै परिवर्तन भइनै रहन्छ परिवर्तनलाइ रोक्न सकिन्न । तर, परिवर्तन र आधुनिकताको नाममा बढिरहेकोे विकृतिले नेपाली समाजलाई कतातर्फ धकेल्दैछ त ? यो नै आज आम नेपालीको चिन्ता र चासो बन्नु पर्ने भएको छ ।
बिशेष गरी पाश्चात्य संस्कृतिको प्रभावका कारण नेपाली समाज आफ्नै पुरातन संस्कृति र परम्परालाई तिलान्जली दिइ रहेको छ । विशेषत पूर्विय संस्कृतिको अनुयाईको रुपमा रहेको नेपाली समाजमा पश्चिमा संस्कृतिले दिनानुदिन यसरी पेल्दै लगेको छ कि हाम्रा धर्म,संस्कृति र मुल्य मान्यता हरु दिनदिनै मासिदै छन् । जसका कारण संस्कृतिमा क्षय हुदै गएको छ । यसरी आफ्नो मौलिक संस्कृतिको क्षय हुनु भनेको नेपाली मौलिकता हराउनु हो । नेपाली कला संस्कृति लोप हुदै जानु नै अहिलको चिन्ताको बिषय हो ।
पाश्चात्य संस्कृतिको प्रभावका कारण नेपाली समाज आधुनिकतामा रुपान्तरित हुदै गएको केही विद्धाानहरुको तर्क रहेको छ तर आधुनिकताको नाममा सत प्रतिशत परसंस्कृति अवलम्वन गर्नु कतिको जायज होला ? परिवर्तन संगसंगै हामीले हाम्रो अस्तित्व कति जोगाएका छौं त यो पनि सोचनिय विषय बन्न पुगेको छ । वास्तवमा जवसम्म कुनैपनि मुलुकमा राजनीतिक अन्यौल कायमै हुन्छ, राजनीतिक स्थीरता हुन्न त्यति नै बेला त्यस देशको कला, संस्कृति माथि आक्रमण हुन्छ । हिजाेआज हाम्रो देशको संस्कृतिमा परेको नराम्रो प्रभावको मुख्य कारण पनि यहाको राजनीतिक कुसंस्कार र बेथिती पनि एक हो । यदि यसरी नै जाने हो भने त, कुनै दिन हामीले नेपाली हुनुको पहिचान खोज्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
प्रसंग भर्खरै जनवरी १ माा सम्पन्न भएको टोपी दिवस र पोषाक दिवसको । नेपाली पहिचान जोगाउन लागि परेका युवाले यस दिवसलाई भव्यताका साथ मनाए तर, यो दिवसको विरोध गर्नेहरु पनि केही देखिए । म ति विरोध गर्ने आम नेपालीलाई भन्न चाहन्छु, आखिर हामी नेपाली हौ भनेर बिश्वसामु चिनाउने पहिलो माध्यम नै हाम्रो नेपाली पहिचान हैन र । त्यो भनेको नेपाली पोशाक, कला र संस्कृति एवं भेषभुषा हैन र रुअनि किन त हामी हाम्रा मौलिक पहिचानलाई भुलेर बिदेशी संस्कृतीको अन्धभक्त बनिरहेका छौ । के आफ्नो पहिचान जोगाउनु पर्दछ भनेर नेपाली पोशाक दौरा सुरुवाल र भादगाउले टोपी लगाएर सडकमा निस्कने युवा अपराधी हुन त ? हैन भने सामाजिक सञ्जालमा किन यतिधेरै व्यंग्य ?
कुनै पनि राष्ट्रको पहिचान भनेको त्यस देशमा बोलिने भाषा, कला , साहित्य , भेषभुषा र रहनसहन हैन र ? आफ्नो पहिचान नै मेटाएर हामी कहा जादैछौं ?
आज धेरै युवायुवतीहरु हाम्रा मौलिक पहिचान, कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने तिर भन्दा अरु बिकसीत देशको सिको गर्न पछि लागेका छन तिनलाई नेपाली मौलिकता बुझाउनु ठूलै गल्ती हो र रु आधुनिकताको मात्र पछि लाग्नु हुन्न भनिरहदा सबैको मनमा एउटा कुरा आउने गर्दछ कि यो सब समयको माग हो परिवर्तनको संवाहक हो । तर, यति मात्र भनेर र समयलाइ मात्र देखाएर तपाइ हामी पन्छिन सक्दैनौ । नेपालको पहिचान नै रहेन भने भोलिका सन्तती र,नेपालको इतिहासले हामिलाइ धिक्कार्नेछ । समाजलाई कुन ढंगले बिकसीत गर्दै लैजाने भन्ने कुरा त्यहाको समाज ,समाजमा रहेका बुद्धिजीवी मानिसहरु र राष्ट्रको राष्ट्रिय नीतिमा भर पर्दछ ।
यहाँ त यो एक्काइसौ शताव्दिको हो त्यसमा पनि नेपालमा त गणतन्त्र आइसक्यो जसले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने पनि थुप्रै भेटिन्छन । यस्तै गलत सोचका कारण नै नेपाली समाज सभ्यतातिर जानु पर्नेमा उल्टो असभ्य, अश्लिल र नैतिकहिन बन्न गइरहेको छ । भेषभुषाकै कुरा गर्ने हो भने दौरा सुरुवाल र गुन्यू चोली लगाउने नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीहरु कम्मर भन्दा चार इन्च मुनि पाइन्ट लगाएर हिड्छन् । पूरा आङ छोप्ने त कुरै छोडौ संबेदनशील अङ्ग जति सबै देखाउछन् । राज्य र सरकारको त कुरै छोडौ । राज्यले नेपालको कुनै औपचारिक राष्ट्रीय पोशाक नै तोकेको छैन । भएको राष्ट्रिय पोशाकलाई हटाएर अराजकता ल्याउने हरु नै अहिले पोशाकको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
सरकारका मन्त्री , प्रधानमन्त्रीहरु अन्तराष्ट्रीय भ्रमणहरुमा राष्ट्रीय पोशकमा जानुपर्नेमा मनलाग्दी पोशाक लगाएर जादा जोकर जस्ता बनिरहेका छन् । नेपालका केहि राजनीतिक दलका नेताहरुले त राष्ट्रीय पोशाक लाइ नै सामन्तवादी पोशाक भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । आम जनतालाइ ति नेताहरुले जवाफ दिने बेला भएको छ । कुनै पनि देशको पहिचान जनाउने पोशाक कसरी सामन्तवादी पोशाक हुन सक्छ रु ।सामन्तवादी त सोच हो पोशाक होइन’।
आधुनिकताको सुगा रटाइ गर्दा गर्दै के यहि हो त एक्काइसौ शताब्दीको आधुनिकता रु अश्लिलता र अराजकता नै यदि आधुनिकता भन्ने हो भने त्यस्तो आधुनिकताको कुनै अर्थ रहन्न । राष्ट्र र राष्ट्रीयता माथि नै आच आउन आधुनिकताको कुनै अर्थ रहन्न । कुनै पनि देशको समाज र संस्कृतिका प्रभाव त्यस देशको साहित्य र कलामा पनि पर्छ । हिजो आज नेपाली साहित्य र कला क्षेत्र पनि दिनानुदिन अश्लिल र दुषित भइरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हिजोआजका अधिकांस नेपाली चलचित्रमा देखाउने दृश्यहरु घर परिवार र समाजको अगाडी बसेर हेर्न सकिन्न । प्राय सबै जसो चलचित्रहरुमा यौन सामाग्रीहरुले ब्यापकता पाइरहेको छ । सिनेमाका नायिकाहरुमा पनि आवश्यकता भन्दा बढी खुल्ला पन देख्न सकिन्छ । हिजो आज त नेपाली चलचित्रका नायिकाहरुले अङ्ग प्रर्दशन गरे भनेर कसैले औला ठड्याउने त प्रश्नै रहन्न किनकी उनिहरु त सिधै लिभिङ्ग टुगेदरको संस्कृतिलाई अगाल्ने खुल्ला रुपमा अन्तबार्ता दिन थालिसकेका छन् ।
हाम्रो समाज र संस्कृतिलाइ कतातर्फ लाने भन्नेमा लेखक एवं कलाकारहरुको ठुलो भुमिका रहन्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सन हुन्न । तर हिजोआजका लेखक तथा साहित्यकारका कृतिहरु अधिकांश जसो छाडा बिषय बस्तु र यौनजन्य सामग्रीले भरिएका पाइएको छ । लेखक तथा साहित्यकारले गहिरिएर सोच्नु पर्ने कुरा के हो भने कतै सिमित मनोरन्जको नाममा आम पाठकहरुमा नराम्रो सन्देश गइरहेको त छैन रुतसर्थ समाज परिवर्तनका वाहक मानिएका लेखकहरुले यस बिषयमा धेरै विचार पुराउनु पर्ने देखिन्छ । तसर्थ आधुनिकताको नाममा बढ्दै गरेको छाडापन र विकृतीलाइ रोकि हामी आधुनिक पुस्ताहरु मिली आफ्ना मौलिक परम्परा र संस्कृति बचाउनु पर्नेछ ,जसको लागि नेपाली पोषाक लगाउँ, नेपाली भाषा , कला र साहित्यको जगेर्ना गरौं । अनि वास्तविक नेपाली हुनुको बास्तबिकता दर्शाउ ।
नेपाली युवा युवतीलाई मेरो अनुरोध म्यारोडोना र रोनाल्डोको तस्विर अंकित टिसर्ट लगाई कपालका रौं ठाठाडो पारेर हिंड्ने दाजुभाइहरु, कहिलेकांहि दौरा सुरुवाल र पाल्पाली ढाका टोपी लगाएर त हेर कति सुन्दर देखिन्छौ , अनि करिना कपुर र कट्रिना क्याफझै टु पिसमा हिड्न रुचाउने आधुनिक भनाउदा दिदी बहिनीहरु कहिले कांहि आफ्नै नेपाली हातहरुले बुनेका गुन्यौ चोली लगाएर त हेर कति सुन्दरी देखिन्छ्याै ।
(लेखक राष्ट्रिय पाेशाक तथा टाेपी दिवशका अभियन्ता हुन् )